Kulan lagu taageerayey Suldaan lagu caleemo saaray degaanka Bacaad-weyn oo Muqdisho lagu qabtay (SAWIRRO)
Waxaa maanta magaalada Muqdisho gaar ahan hotelka Wardheer lagu qabtay kulan balaaran oo lagu taageerayey suldaanka cusub ee beesha Qubeys Suldaan C/llaahi Suldaan C/raxmaan Suldaan Muxumad oo dhowaan lagu caleemo saaray degaanka Bacaad-weyn ee gobolka Mudug.
Kulankan oo ahaa mid qaddo ah ayaa waxaa ka qeyb galay Waxgarad, Odayaal dhaqameedyo, aqoonyahano, Qurba-joog, dhalinyaro iyo haween ayaa waxaa si weyn loogu ayiday Suldaanka cusub ee la caleemo saaray.
Waxaa kulankaas ugu horeyn ka hadlay Ex: xilibaanad Caaqil Xuseen Geeddi Jimcaale oo halkaas ka jeediyey hadalo soo dhoweyn iyo taageero ah wuxuuna xusay in xubnaha beesha Qubeys ee jooga Xamar ay si weyn u taageerayaan suldaanka cusub.
Suldaan C/nuur Axmed Shiikh Muuse oo isna ka hadlay kulankan ayaa faahfaahin ka bixiyey taariikhda Saldanada beesha Qubeys oo uu sheegay iney soo taxneyd muddo fog.
“Suldaanka cusub Suldaan C/llaahi, awoowayaashiis ayaa suldaano ahaa sida ka muuqata abtiriskiisa waa nin culumo ah, ILAAHAY ka baqa, weligiisna aan bulshada dembi ka gelin waxaaana alle uga baryeynaa inuu xilkaas ALLE la garab galo” ayuu yiri Suldaan C/nuur oo dad yar oo suldaanka diidan ugu baaqay iney taageeraan, iskana dhaafaan khilaafka.
Sidoo kale, waxaa kulankan ka hadlay Ugaas C/raxmaan Xaaji Xuseen oo suldaanka cusub ugu baaqay inuu cadaalad ku maamulo shacabka uu hogaanka u hayo, kuna dedaalo sidii bulshada horumarkeeda looga shaqeyn lahaa.
Waxaa sidoo kale hadalo isugu jiray Guubaabo, taageero iyo Duco ka jeediyey xubno fara badan oo ay ka mid yihiin Shariif Shiikh Cumar Maxamed oo ku hadlayey magaca qurba joogta Qubeys, Caaqil Shiikh Axmed Shiikh C/llaahi Shiikh Cumar, Nabadoon Aadan Cali Xasan, Axmed Muxumad Aadan, Ubax Maxamed Aadan oo ku hadleysay magaca haweenka beesha iyo xubno kale.
Intii munaasabadaas ay socotay ayaa haween ka tirsan kuwa ka soo qeyb galay kulankan waxay ka tiriyeen buraanburo iyo Suugaan kale oo ay ku taageerayaan suldaanka cusub ee beesha Qubeys Suldaan C/llaahi Suldaan C/raxmaan Suldaan Muxumad, waxayna xafladaas ku soo dhamaatay jawi aad u wanaagsan.